Ny filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina dia mitaraina ho amin'ny fampidirana afrikana izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny filohan'ny filankevi-pitantanana afrikanina dia mitaraina ho amin'ny fampidirana afrikana izao
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Biraon'ny fizahantany afrikanina amin'ny hetsika lehibe
Tamin'ny lahateny fanokafana tamin'ny Intra-African Trade Fair 2021 natao ny 15-21 novambra 2021, tany Durban, Afrika Atsimo, dia nisy ny antso ho amin'ny fampidirana mba hahafahan'ny sehatry ny fizahantany ara-toekarena miasa amin'ny fomba tsara kokoa. Manohana tanteraka izany ny filohan’ny African Tourism Board (ATB), Cuthbert Ncube.
Ny fiantsoana natao dia ny mba hivondronan’ny mpiara-miombon’antoka rehetra ho vondrona iray.
Voalaza fa izao no fotoana hanombohan'ny fanombanana ny fironana sy ny fiantraikan'ny fihemorana amin'izao fotoana izao amin'ny areti-mifindra ary ny famolavolana modely fanarenana iombonana.
Ny maodely dia azo adika avy eo hamorona izay tokony ho andry hanalefahana ny fiantraikan'ny toekarena amin'ny COVID-19.
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB), naorina tamin'ny taona 2018, dia fikambanana malaza iraisam-pirenena amin'ny maha-mpanentana ny fampandrosoana tompon'andraikitra amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany mankany, avy, ary ao anatin'ny faritra Afrikana. Efa hatramin'ny ela no mpomba ny fanolorana an'i Afrika ho toerana fizahan-tany tokana.
Ny fiantraikan'ny valan'aretina dia hitohy amin'ny 2023 ary mety amin'ny 2025, fa ny vaovao tsara dia ny ankamaroan'ny toeran'ny kaontinanta dia nitady fomba hifanaraka ary namolavola drafitra fanarenana hitantana ny fanokafana indray ny indostrian'ny fizahantany.
Tokony hisy tolo-kevitra hentitra ho an'ny governemanta mba hifanaraka amin'ny fomba hanatanterahana izany mba hamelomana indray ny indostrian'ny Travel sy ny fizahantany izay ao anatin'ny tsindry mafy amin'izao fotoana izao. Ilaina maika ny fiaraha-miasa amin'ny fomba samy hafa, manao ezaka amin'ny famahana ny sakana ara-barotra sy fitsangatsanganana araka ny voalaza hoe: "Misokatra ho an'ny orinasa i Afrika." Hatramin'izao dia mbola nofinofy ratsy ny fandehanana any amin'ny firenena mpikambana iray mankany amin'ny iray hafa.
Ny olana fototra dia mila dinihina alohan'ny hankafizan'i Afrika ny ezaka ara-barotra Intra-Africa. Ny sehatry ny Fizahantany angamba no sehatra mety hivoatra indrindra amin'ny kaontinanta ary azo ampitomboina maharitra mba hamahana izany filàna izany. Miaraka amin'ny fandrindrana mahomby sy ny fifampidinihana manerana ireo toeran'ny faritra, Afrika dia afaka maneho ny tenany amin'ny sehatry ny Travel sy ny fizahantany ho iray.
Tsy maintsy nanao sorona tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena lehibe sy fahafahana mitombo i Afrika izay mety ho azon'ny Fizahantany hanonerana sy hitondrana ny kaontinanta manontolo. Ny fisainana tery sy ny fiarovana ny ampahany fotsiny amin'ny firenena afrikana pie amin'ny firenena dia fomba fijery fohy izay tsy mahita ny sary lehibe kokoa. Betsaka ny fahafahana azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiharana paikady mirindra tsara satria entanina ny fampifanarahana ny fifanarahana eo amin'ny roa tonta mba hahazoana antoka fa ny firenena dia miara-miasa amin'ny hetsika ara-barotra sy ny sehatry ny fizahantany amin'ny ankapobeny ka ny fitomboana sy ny fanitarana no tanjona.
HE Nkosazana Zuma, filohan'ny Vondrona Afrikanina (UA) teo aloha sady minisitry ny Tchad teo aloha
Ny filoha teo aloha ao amin'ny AU dia nanantitrantitra ny ilana ny kaontinanta hanomboka hankasitraka ireo hetsika naroson'ny AU sy nampiharina. Indrindra indrindra, mila manomboka manonta ny pasipaoro AU izay nasaina havoaka any amin'ny firenena tsirairay ireo firenena mpikambana. Ny tsy fahampian'ny finiavana avy amin'ny firenena handray anjara dia mandripaka ny fandrosoana sy ny fampiharana io pasipaoro io izay mety hanokatra ny varavaran'ny fizahantany.
Natrehan’ny Minisitra hajaina sady filohan’ny AU teo aloha Nkosazana Zuma niaraka tamin’ireo tale jeneralin’ny filankevi-pitantanan’ny fizahantany avy any Afrika sy ireo olo-manan-kaja hafa ny Foara Ara-barotra Intra-Afrique.
Ny African Tourism Board (ATB) dia anisan'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP). Ny Fikambanana dia manome soso-kevitra mifanaraka, fikarohana lalina ary hetsika vaovao ho an'ny mpikambana ao aminy. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny daholobe, ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanjany ary ny kalitaon'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Afrika. Ny Fikambanana dia manome fitarihana ary manoro hevitra amin'ny isam-batan'olona sy miaraka amin'ireo fikambanana mpikambana ao aminy. Ny ATB dia manitatra ny fahafaha-manao varotra, fifandraisana amin'ny besinimaro, fampiasam-bola, marika, fampiroboroboana ary fananganana tsena manokana. Raha mila fanazavana fanampiny, kitiho eto.